Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News | Page 4
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Page 4
M/weyne Xasan SHeekh oo maanta si rasmi ah u furey shirka Madasha wadatashiga Doorashooyinka 2016ka.
Dad lagu sheegey in ay ka tirsanyihiin Xarakada al-shabaab oo maxkamada ciidamada qalabka sida xukun ku ridey.
Qoys ay laayeen Ciidamada Amisom oo Eheladoodu baaq u direen Dawladda Federalka Soomaaliya.
Xasan SHeekh oo sheegey in canshuuraha Qaadka la kordhinayo si dadka soomaaliyeed u yareeyaan cunistiisa iyo ka ganacsigiisaba.
Dalka Sucuudiga oo La Sheegayo in uu Waqtigan u Hanqal taagayo Sameysashada Hubka Halista ah NUKELIER.
Dawladda Sacuudi Carabiya ayaa ku goodiday in ay samaysan doonto hub nukliyeer ah haddii Iiraan oo ay gobolka isku hayaan ay samaysato hubkaas. Dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed Bin Salmaan ayaa warbaahinta Maraykanka laga leeyahay ee CBS News u sheegay in dalkiisu uusan rabin in uu samaysto Nukliyeer. "Balse shaki kuma jiro...
Dagaal La Sheegey in uu u Dhaxeeyey Ciidamada Itoobiya iyo AL-shabaab oo ka Dhacey Gobolka Hiiraan.
Xaalada deegaannadii ay maalintii shalay ku dagaalameen ciidamada Itoobiya iyo Al-shabaab ee gobolka Hiiraan ayaa degan sida ay inoo xaqiijiyeen dadka deegaanka. Dagaalka ayaa ka dhacay meel u dhaw deegaanka Ceelgaal oo qiyaastii 17km dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Beledweyne. Dagaalka ayaa dhacay kaddib markii xoogag ka tirsan Al-shabaab waddada u...
Ciidamo kasocda dalalka midawga afrika oo madaxweynaha Burundi uu kasoo horjeestey.
Madaxweynaha Burundi, Pierre Nkuruziza ayaa ka soo hor-jeestay in Dalkiisa la geeyo Ciidammo Nabad-ilaalinta ah oo ka socda ururka Midowga Afrika, kaddib kulan uu Bujumbura kula qaatay Wufuud ka socotay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo booqday Bujumbura. Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa si weyn niyad-jab uga muujiyay kulankii ay Nkurunziza...
Samatar C/qeybdiid oo R/wasaare Khayre uu Gurigiisa ku Booqdey isagoo uga Tacsideeyey Ciidamadii Gurigiisa Galey.
Ra’iisal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xalay hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ku booqday Senator Cabdi Xasan Cawaale oo ah guddoomiyaha Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya. Ra’iisul Wasaaraha ayaa Ujeedka booqashadiisa la xiriirtay in uu la qeybsado Senetorka dareenka ka dhashay falkii lagu weeraray Gurigiisa, kaasi...
Deeqda Abaaraha oo Somaliland ku eedeysey Dawladda Soomaaliya in ay Siyaasadeyneyso.
Wasiirka Warfaafinta Somaliland Cusmaan Cabdullaahi Saxardiid, ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay siyaasadeyneyso Gargaarka loogu talagalay dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku nool Somaliland. Mudane Saxardiid, ayaa sheegay haddii dowladda ay wado arrimo kale in ay iska heystaan gargaarka. “Dowladda Soomaaliya weey ka qeyb-qaateen gurmadka abaaraha, balse maanta siyaasada aad ku...
Nin U Qaabilsanaa Hawl Galada Al-shabaab oo la sheegey in la qabtey/Maxaa lagu magacaabaa sarkaalka?.
Ciidamada dowlad gobolleedka Puntland iyo kuwa Galmudug oo howlgal wada jir ah fuliyay ayaa la sheegay in ay qabteen sarkaal dhinaca howlgalada u qaabilsanaa Al-shabaab. Wararka ka imanaya Gaalkacyo ayaa sheegaya in howlgalka oo ahaa mid qorsheysan ayaa lagu soo qabtay C/risaaq Husseen Tahliil oo loo yaqaanay (Calool Geel) iyo...
Gubashada booyad shidaal oo sababtey dhimashada in ka badan 40 qof dalka Kenya.
Ugu yaraan 40 qof ayaa dhintay kadib markii booyad shidaal sidday ay ku qaraxday inta u dhexeysa caasimada Kenya ee Nairobi iyo magaalada Naivasha. Booyada ayaa la sheegay inay shil gashay kadib markii darawalkii uu gaariga xaddidi waayay. Waxaa la sheegay in markii hore hal gaari oo kale ay booyada...
Safiir Cusub oo dawladda Itoobiya usoo Magacawdey Soomaaliya.
Dowladda Itoobiya ayaa is bedel ku sameysay Safiirkeedii Soomaaliya joogay oo lagu magacaabo Wondimu Asamne, kaddib markii uu waqtigiisu dhamaaday. Safiirka cusub ee Soomaaliya loo soo magacaabay ayaa lagu magacaabaa Jamaaludiin Mustafa Cumar oo horay u ahaa Safiir kuxigeenka Soomaaliya. Wakaalada wararka Itoobiya ee ENA ayaa shaacisay in warqad ka soo baxday...
Gudigga Amniga iyo Difaaca Barlamaanka Federalka Soomaaliya oo Kulan ku yeeshey Villa Hargeysa.
Guddiyada Amniga iyo Difaaca ee Golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa shalay gelinkii dambe kulan ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa, iyagoo kulankan looga hadlay xaaladaha amni ee dalka iyo mooshinkii shalay la horgeeyay Baarlamaanka. Kusimaha Guddoomiyaha Baarlamaanka ahna Guddoomiye kuxigeenka 1aad C/wali Ibraahim Muudey ayaa ku wargeliyay Guddiyada Amniga iyo...
Maxamuud Sayid Aadan M/weyne Kuxigeenka Jubaland oo Sheegey in Barlamaanka Soomaaliya aysan Cid kale Eed Saari karin.
Madaxweyne kuxigeenka 1-aad ee dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Max’uud Sayid Aadan oo xalay khudbad ka jeediyay munaasbad lagu xusayay 5 sano guuradii kasoo wareegtay aasaaskii Jubbaland ayaa ka hadlay khilaafka soo kala dhexgalay baarlamanka dowaldda Soomaaliya. Waxa uu xusay in hogaanka baarlamanka laga doonayo in ay ilaaliyaan dhaartii ay mareen...